Panthenol, Polyquaternium, Pvp Polymer, Nlekọta Onwe Gị - Y&R
Y & R, edebanyere aha na Tianjin Free Trade Mpaghara (FTZ), a na-ahazigharị ụlọ ọrụ ahụ site na Kingchem International Ltd nke nke mbụ guzobere na 2012. Anyị na-etinye aka na mmepụta na ikesa pọtụfoliyo sara mbara nke ọpụrụiche, akụrụngwa, ihe mgbakwunye. , ndị etiti na ihe mgbaze maka ịchọ mma / nlekọta onwe ụwa, ọgwụ, nri, H & I na ụlọ ọrụ Hi-Tech ndị ọzọ.
Anyị na-achọ 'Mutural Trust & Sharing, Mutual Cooperation & Uru' mgbe niile, anyị na-agbasi mbọ ike ịnapụta ngwaahịa dị iche iche, ọrụ maka ndị mmekọ anyị.
Anyị na-elekwasị anya n'ichepụta na ịnye vitamin, PVP Polymers na Pyrrolidone ihe mgbaze / etiti, PVM / MA Copolymers, Kojic Acid dipalmite na wdg.
Y & R (YNR) na-etinye aka mgbe niile iji mejuputa atụmatụ nke mmepe mmepe, lekwasịrị anya na nkwekọ nke mmadụ na ọdịdị maka ịgbalịsi ike imepụta ụzọ mmepeanya.
E guzobere nke mbụ
Nzaghachi na Ọrụ
Y & R, debara aha na Tianjin Free Trade Mpaghara ...
Emegharịrị ụlọ ọrụ ahụ site na Kingchem International Ltd nke izizi guzobere na 2012.
New Type Polyquaternium-11 Grandly La ...
Typedị Polyquaternium Newdị Ọhụrụ-Lalọ Ọrụ Pụrụ Iche The tradional Polyquaternium-11 bụ ihe ruru. 20% siri ike ọdịnaya na elu molekụla arọ. Iji mezuo ọchịchọ ahịa, anyị na-ewebata Polyquaternium-11 50%. Polyquaternium-11 bụ polymeric quaternary ammonium nnu guzobere site na mmeghachi omume nke diethyl ...
AHECREC AKW OFFKWỌ Maka DL-Panthenol Powder
Anyị na-enye ọnụahịa pụrụ iche maka DL-Panthenol Powder USP Grade n'oge Sep.01,2020 ruo Sep.30,2020.Y ga-enweta nzaghachi ngwa ngwa na nkọwa ozugbo ị zitere anyị arịrịọ ọ bụla. DL-Panthenol bụ nnukwu humectants, na-acha ọcha ntụ ntụ, soluble na mmiri, mmanya, propylene glycol.DL-Panthen ...